कब्ज राहतका लागि २० घरेलु उपचार | एकलकेयर - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी समुदाय औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कल्याण >> कब्जको लागि २० घरेलु उपचार
कब्जको लागि २० घरेलु उपचार
शौच शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सामान्यतया, एक व्यक्ति प्रत्येक हप्तामा तीन वा बढी आन्दोलित पार गर्न आवश्यक छ। केहि व्यक्तिहरु दिनमा दुई वा तीन पटक पुप गर्दछन्। कब्ज हुन्छ जब मलमा कोसामा पदार्थ सख्त हुन्छ, र मल त्याग गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वस्थ मल स्थिरता नरमको साथ साथै फार्ममा लामो र ट्यूबलर हुनुपर्छ।
निर्जलीकरण, तनाव, व्यायाम को अभाव, र फाइबर को कमी कब्ज को केहि कारणहरु छन्। अत्यधिक खानपान र जunkक फूड खपत गर्दा पनि कहिलेकाहीं आन्दोलित हुन सक्छ। यो धेरैको साझा साइड इफेक्ट पनि हो पर्चेको औषधि ।
कब्जले सबै उमेर समूहलाई असर गर्न सक्छ, तर विशेष गरी बुढेसकाललाई। एक तिहाइ वयस्क को experience० भन्दा बढी उमेरको कब्जको अनुभव। अरू जो कब्ज वा दीर्घ कब्जको लागि अति संवेदनशील हुन्छन् महिलाहरू, विशेष गरी तिनीहरू जो गर्भवती छन् वा भर्खरै जन्मेको जन्म, र गैर-काकेशियनहरू हुन्।
कब्ज एकदम असहज हुन सक्छ, तर धन्यबाद, कब्ज को प्रयास को लागी धेरै घरेलु उपचार।
खाना पछि उच्च रक्त शर्करा को लक्षण
कब्ज राहतका लागि २० घरेलु उपचार
आहार परिवर्तन, पिउने पानी, व्यायाम, र पूरक लिनु कब्ज को लक्षणहरु राहत को लागी प्राकृतिक तरीका हो। कब्जमा योगदान पुर्‍याउने कारकहरूको पहिचान गर्दा तपाइँ कुन उपचार उत्तम हो निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। समस्याको उपचार गर्न तलका उपचारहरूको संयोजन आवश्यक हुन सक्छ।
दूध र घी
छाला, नेभारा, किसमिस
ओमेगा3तेल
पर्याप्त पानी पिउनको लागि पहिलो चरण हुन सक्छ कब्ज राहत । जब एक व्यक्ति डिहाइड्रेटेड हुन्छ, शरीरले शरीरको सबै कुनाबाट पानी तान्न थाल्छ, कोलनलगायत। दिनमा to देखि glasses गिलास पानी पिउँदा हाइड्रेटेड रहँदा मल नरम रहन सक्छ, आन्द्रा चालहरू बढी नियमित र सहज हुन्छ।
नियमित व्यायामले स्वस्थ आन्द्रा चालहरूलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ। दुबै जोरदार र निष्क्रिय गतिविधिले मल त्यागमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। दौडनाले आन्द्रा र कोलोनलाई ढकढक्याउन सक्छ जसले मललाई सार्न प्रोत्साहित गर्दछ। खेल गतिविधिहरूमा भाग लिनुहोस्, नाच्नुहोस्, वा दिन मा एक वा दुई पटक १० देखि १ minutes मिनेट हिंड्दा तपाइँलाई नियमित राख्न मद्दत गर्दछ।
कब्ज असहज हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं फुलेको वा बकबक हुनुहुन्छ भने, व्यायामलाई कहिलेकाहीं गाह्रो बनाउँदै। प्राकृतिक मल त्यागको लागि बढी आरामदायक दृष्टिकोण तनाव र अभ्यास योगको माध्यमबाट हुन सक्छ। योग, विशेष गरी धडको घुमाउने गतिसहित, आंताहरू निचो गर्न सक्छ जसले मल कोलोनमा ढिलो हुन्छ। घुमाइएको मोड र सुवाईन मोड दुई योग स्थिति हो जुन धड घुमाउने समावेश गर्दछ। डाउनहेडिंग कुकुर र अगाडि मोड्ने कुञ्जी जस्ता अन्य धेरै पोजहरू पनि आन्द्रा चाललाई उत्तेजित गर्नका लागि सिफारिस गरिन्छ।
Ab पेटको मसाज
पेट मालिश गर्दै कब्जको लागि लाभदायक घरेलु उपचार हुन सक्छ। तपाईंको पछाडि झुम्कनुहोस्, घडीको दिशामा करीव १० मिनेटको लागि पेट प्रेस गर्नुहोस्। तपाईं दिनको दुई चोटी यो मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। घडीको दिशाले मसिनो कोलोनमा मल निकाल्न सहयोग गर्दछ। मसाज अघि तातो पानी वा चिया पिउँदा ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्दछ।
पर्याप्त फाइबर खाने स्वस्थ पाचन प्रणालीमा साथ साथै वजन घटाउन योगदान गर्न सक्छ। आहार फाइबर खपतको लागि दैनिक सिफारिस हो २ to देखि grams० ग्राम फाइबर को। फाइबर घुलनशील र अघुलनशील हुन सक्छ। घुलनशील फाइबरले मल घनत्व प्रदान गर्दछ, जबकि अघुलनशील फाइबर कोलन भित्र सर्ने गतिमा योगदान गर्न सक्दछ।
फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थहरूमा दुबै घुलनशील र अघुलनशील फाइबर हुन्छ। ओटमील, फ्याक्ससेड, सम्पूर्ण अन्न, फल, सिमी, चोकर, र तरकारी जस्ता खानाहरूले कडा मललाई रोक्न सक्ने फाइबर स्रोत प्रदान गर्दछ। आहार विकल्पहरूले कब्जमा ठूलो प्रभाव पार्दछ।
ओटीसी फाइबर सप्लीमेन्टले फाइबर युक्त खाद्य पदार्थहरूको अत्यधिक मात्राको सेवन नगरी फाइबर सेवन बढाउन मद्दत गर्दछ। फाइबर सप्लीमेन्ट्स क्याप्सूल फारम वा पाउडरमा आउँछ जुन पानीमा थप्न सकिन्छ, निर्देशनको रूपमा लिनुहोस्।
फाइबर पूरकहरूको तुलना गर्नुहोस्
ब्रान्ड नाम प्रशासन मार्ग मानक खुराक साइड इफेक्ट
मेटामसिल (साइकलियम फाइबर) मौखिक5क्याप्सूल प्रति फाइबर को २ g; प्रति चम्मच पाउडरको तीन ग्राम फाइबर सास फेर्न कठिनाई, खुजली छाला, निलग्ने समस्या, अनुहारको सुन्नि, फुल्की
सिट्रुसेल (methylcellulose) मौखिक प्रति २ क्याप्सुलमा फाइबरको १ ग्राम; प्रति चम्मच पाउडरको २ ग्राम फाइबर अपच, मतली, थकान, दाग दाँत
बेनिफिबर (गहुँ डेक्सट्रिन) मौखिक पाउडर को २ चम्मच प्रति फाइबर को3जी पखाला, ब्लोटिंग, क्रम्पिंग
पानी वा रसमा पाउडर फाइबर सप्लीमेन्टहरू थप्नुहोस् तर सोडा जस्तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थहरू होइन। तपाईंको शरीरको समयलाई फाइबर पूरकमा समायोजन गर्न अनुमति दिनुहोस्। अतिरिक्त पानी पिउँदा साइड इफेक्टहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ, ब्लोटि blo जस्ता।
सम्बन्धित: मेटामसिल विवरणहरू Citrucel विवरण साइकलियम फाइबर विवरण मेथेलसेल्युलोज विवरण
प्रोबायोटिक्सको साथ पाचनले कब्ज कम गर्न सक्छ। प्रोबायोटिक्सले पाचन प्रणालीमा स्वस्थ जीवाणुहरू पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा फेला परेको खाद्य जस्तै सौरक्रुट र दही वा एकको रूपमा लिइन्छ पूरक , प्रोबियटिक्स तपाईंको कब्जा रोक्न वा राहत दिनको दैनिक तालिकामा थप्न सकिन्छ।
Cast. क्यास्टरको तेल
एक प्राकृतिक रेचक, एरंडेल तेल एन्डरको गेडाबाट निकाले मौखिक रूपमा आन्द्रा चाललाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। यस प्राचीन तेलले आंतहरू लुब्रिकेट मात्र गर्दैन, तर यसले आंतहरूलाई पनि संकुचित बनाउँछ। एरंडेलको तेल निर्देशितको रूपमा लिनुहोस्, खाली पेटमा एकदेखि दुई चम्मच। आंत्र आन्दोलन हुन आठ घण्टा सम्मको लागि अनुमति दिनुहोस्।
क्याफीनयुक्त कफी पिउँदा आन्द्रा चाललाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। क्याफिनले आन्द्राको मांसपेशीहरू संकुचन गर्न सक्छ। यो उत्तेजनाले मललाई मलाशयतिर सार्न सक्छ। जे होस् क्याफेनिटेड कफिले आन्द्रालाई सार्न मद्दत गर्दछ, यो डिहाइड्रेटिंग पनि हुन सक्छ। क्याफिनेटेड पेय पदार्थ पिउँदा प्रशस्त पानी पिउन नबिर्सनुहोस्, अवस्था बिग्रन नदिन।
सेन्ना एक जडिबुटी हो जसले पात, फूल र क्यासिया बोटको फल प्रयोग गर्दछ। यो प्राकृतिक रेचकको रूपमा हजारौं वर्षसम्म प्रयोग भइरहेको छ। Senna एक हो उत्तेजक रेचक यसले पाचन पथ संकुचन गर्न मद्दत गर्दछ। अक्सर चियाको रूपमा पिए, सेन्ना धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ र खपत पछि केही घण्टा भित्र काम गर्न सक्दछ। एफडीए द्वारा अनुमोदित, सेन्ना ट्याब्लेट वा पाउडर पूरकको रूपमा उपलब्ध छ। यसले इरिडियल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS) र हेमोर्रोइड्सको साथ पनि मद्दत गर्न सक्छ।
न्यानो तरल पदार्थ पाचन र जठरांत्र प्रणालीको लागि सुखदायक हुन सक्छ। अदुवा र पेपरमिंट जस्ता केही चियाहरूले पेटलाई दुखी तुल्याउँछ। तल चियाहरूको सूची छ जुन उपयोगी साबित हुन सक्छ यदि तपाइँ कब्जको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ:
अदुवा: यो न्यानो मसलाले तातो उत्पन्न गर्दछ र पाचन गति गर्दछ।
पेपरमिन्ट: मेन्थोलले पेटलाई दुखी तुल्याउन सक्छ र आन्द्राबाट मल सार्न सक्छ।
क्यामोमाइल: पाचन मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ, जसले तनाव र तनावको बेला आन्द्रालाई आफ्नै मा बढ्नबाट रोक्न सक्छ।
लाईकोरिस मूल: यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरूले खाना पचाएपछि पाचन प्रणाली सजिलो बनाउन सक्छ।
डन्डेलियन जड़: कलेजोलाई उत्तेजित गरेर हल्का कब्ज को कम गर्दछ।
कालो वा हरियो चिया: क्याफिनेटेड चिया आन्द्रालाई उत्तेजक बनाउन कफीको समान कार्य गर्दछ।
१०. नीबूको जुस
निम्बूको रसले शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू फलाउन सहयोग गर्न सक्छ। एक प्राकृतिक पाचन सहायता को रूप मा, कागली को रस पिउनको पानी वा चियामा जोड्न सकिन्छ आन्द्राको उत्तेजना बढाउन। ताजा निचोने कागती को रस उत्तम छ।
अक्सर कटौती र जलेको बाहिरी रूपमा प्रयोग गरीन्छ, तपाईं पाचन पथलाई शान्त पार्न मौखिक रूपमा एलोभीरा लिन पनि सक्नुहुन्छ। एलोवेरा जूस सादा पियनुहोस् वा कब्ज र IBS लाई कम गर्न मद्दतको लागि यसलाई स्मूदी वा अन्य पेय पदार्थहरूमा थप्नुहोस्।
१२. नरिवल पानी
नरिवल पानी पिउँदा डिटोक्सिफाई र हाइड्रेटिंग हुन सक्छ। यसले किडनीको कार्य वृद्धि गर्दछ र पाचन प्रणालीलाई उत्तेजित गर्दछ। म्याग्नेशियम प्राकृतिक रूपमा नरिवलको पानीमा पनि फेला पर्दछ, जसले आन्द्राको भित्तामा रहेका मांसपेशीहरूलाई शरीरबाट मल बाहिर जान्छ।
भिटामिन तपाईंको पाचन प्रणाली सन्तुलित राख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। तल गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल स्वास्थ्यको लागि सिफारिश गरिएको भिटामिनहरूको सूची छ।
भिटामिन बी -१
यी भिटामिनहरू भएको खाना खाने तपाईंको आन्द्रा चालहरूको संख्या बढाउन सक्छ। पूरक फाराममा भिटामिनहरू तपाईको दैनिक सिफारिशको उचित मात्रामा पाउनु हुन्छ भन्ने कुराको अर्को तरीका हो।
धेरै दुग्ध वा दुग्धजन्य पदार्थहरू सेवन गर्दा कहिलेकाहीं कब्ज हुन सक्छ, केही मानिसहरू तातो दुधको प्रयोग गरेर आन्द्रालाई उत्तेजित गर्न सक्छन्, विशेष गरी जब घी थप्दा। घी स्पष्ट रूपमा माखन र एक प्राचीन उपचार उपकरण छ। आयुर्वेदिक अभ्यासहरूले हजारौं बर्षदेखि यसको उपचार गुणहरूको लागि घी प्रयोग गर्‍यो। तपाईं साँझ न्यानो दुधमा एक देखि दुई चम्मच घी जोड्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ र भोलिपल्ट बिहान आन्द्रा आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्न।
सौंफ एक कोमल, प्राकृतिक रेचक छ। भुटेको सौंफ न्यानो पानीमा थप्न सकिन्छ र साँझ पिएर। सौंफको दानाले पाचन प्रणालीमा ग्यास्ट्रिक एन्जाइमहरू बढाउँदछ, जसले मललाई प्रभावकारी रूपमा कोलनमा सार्न मद्दत गर्दछ।
१un. छाला, नेभारा र किसमिस
राइट स्टेट युनिवर्सिटी बुन्शोफ्ट स्कूल अफ मेडिसिनका सहायक डिन र यसका लागि योगदानकर्ता, एमडी लेन पोष्टन भन्छिन्, खाना पकाउन कब्जको लागि मानक घरेलु उपचार भएको छ। आइकन स्वास्थ्य । उनीहरूको फाइबर सामग्री बाहेक, उनीहरूले सोर्बिटोल समावेश गर्दछ, जसले रेचक प्रभाव देखाउँदछ।
सुक्खा प्लम वा prunes सधैं आंत्र आन्दोलन नियमित राख्न को लागी सूची मा गरीएको छ। Prunes खान वा prune को रस पिउने जेष्ठ नागरिकहरु को लागी मात्र होइन। प्रत्येक बिहान छ-औन्स गिलास काँटाको रस कब्ज समाप्त गर्ने उपाय हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई prunes मनपर्दैन भने, किसमिस वा नेभारा खाने एक समान प्रकार्य प्रदान गर्दछ। सुख्खा फलमा prune को रस पिउनु भन्दा बढी फाइबर छ, तर दुबै एक प्राकृतिक रेचक गुण छ।
पाचन स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने एन्जाइमहरू भरिएको चक, मह एक सामान्य घरेलू वस्तु हो जुन हल्का रेचक पनि हो। जब सादा लिनुहोस् वा चिया, पानी, वा न्यानो दुधमा थपियो, महले कब्ज सजिलो बनाउन सक्छ।
चश्मा, विशेष गरी कालोस्ट्र्याप गुड, मल मल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। ब्ल्याकस्ट्र्याप गुड भनेको गुड हो जुन एकाग्र गरिएको फार्ममा उमालिन्छ र यसमा महत्त्वपूर्ण भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन् जसले म्याग्नीशियमले कब्ज राहत प्रदान गर्दछ। साँझको मैदानमा एक चम्चा वा न्यानो पानीमा थपेमा बिस्तारै बिस्तारै आंत्र आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
ओमेगा3तेल माछाको तेलमा, हेम्प बीजको तेल, र फ्याक्ससेड तेलले रेचक प्रभावको लागि आन्द्राको भित्ता ल्युब्रेकेट गर्दछ। सामन, flaxseed, avocados, र हम्प उत्पादनहरु को रूप माछा समावेश माछा पनी यो पाचन प्रणाली को लागी यी तेल लाई परिचय गर्न सक्छन्। ओमेगा supp सप्लीमेन्टहरू पनि उपलब्ध छन् यदि तपाईं चाहानु हुन्न वा नियमित रूपमा यी खाद्यहरू खान सक्नुहुन्न।
बेकिंग सोडा, अर्को घरका मुख्य, कोलन सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। लगभग एक चौथाई कप तातो पानीको एक चम्चा बेकिंग सोडाको समाधान बनाउनुहोस्। पकाउने सोडा पेटको एसिडको साथ प्रतिक्रियामा मल त्याग्छ।
कब्जको लागि घरेलु उपचारको अतिरिक्त, ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) उत्पादनहरू आन्दोलनको उत्तेजनामा ​​पनि लाभदायक हुन सक्छ। मौखिक रेचकहरू, एनीमा, र सपोसिटरीहरू कब्जबाट राहत पाउन कुनै पर्चा बिना खरीद गर्न सकिन्छ। रेचक र स्टूल नरम बिभिन्न प्रकारमा आउँछन् र केही घण्टा भित्रै प्रभावकारी हुन्छन्।
रेचकहरू तुलना गर्नुहोस्
नाम औषधि वर्ग प्रशासनिक मार्ग फारामहरू साइड इफेक्ट
सेनोकोट (सेन्ना) उत्तेजक रेचक मौखिक क्याप्सूल, ट्याबलेट, पाउडर, तरल मांसपेशी दुख्ने, थकान, भ्रम, पुराना
Dulcolax (Doconate सोडियम) Surfactant रेचक मौखिक क्याप्सल, तरल, suppository छाला दाग, मतली
मिरालक्स (पॉलीथीन ग्लाइकोल) Osmotic रेचक मौखिक पाउडर फोहोर, पखाला, अनुहारको सूजन
यदि कब्ज अधिक तत्काल राहत पाउन आवश्यक छ भने, एनिमा रेचक भन्दा बढी उपयोगी हुन सक्छ। एनिमास प्राय: नुनिलो घोलबाट बनेको हुन्छ जुन मलाशयमा सम्मिलित हुन्छ। एनीमाबाट तरल आन्द्राबाट स्टूल फ्लश हुन्छ। जे होस् एनिमास सुरक्षित र प्रयोग गर्न सजिलो छन्, त्यहाँ यस विधिलाई बढी प्रयोग गर्ने बारे चेतावनीहरू छन्।
कब्जको लागि अर्को उपचार रेचक सपोसिटरीहरू, जुन मलाशयमा सम्मिलित हुन्छ। ग्लिसरीन ट्याब्लेट सपोसिटरीले हल्का देखि मध्यम कब्जबाट राहत पाउन सक्छ। एक पटक सम्मिलित गरेपछि, सपोसिटरी पग्लिन थाल्छ। ट्याब्लेट पूर्ण रूपमा विघटन हुन सक्दैन तर प्रभावको लागि १ to देखि to० मिनेट भित्र राख्नु पर्छ। فرض गर्नुहोस् कब्ज कम गर्न कोमल र छिटो अभिनय उपकरण हुन सक्छ।
सम्बन्धित: सेनोकोट विवरणहरू Dulcolax विवरण Miralax विवरण | Senna विवरण | Doconate सोडियम विवरण Polyethylene glycol विवरण
कब्जको लागि जब डाक्टरलाई भेट्ने
अधिकांश व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनकालमा कब्जको केही प्रकारको अनुभव गरेका छन्। जबकि कब्ज आफ्नै हिसाबले जान सक्छ, यो सामान्य बिरामीको असुविधा कम गर्न के के गर्न जान्न सहयोगी छ। यदि कब्ज वा ओटीसी उत्पादनहरूका लागि घरेलु उपचारले मल त्याग गर्दैन भने, एक व्यक्तिलाई चिकित्सा सल्लाह लिन आवश्यक पर्न सक्छ। उपचार नगरेको कब्जले असर गरेको मल त्याग्न सक्छ।
कब्ज एक ठूलो स्वास्थ्य चिन्ताको एक लक्षण हुन सक्छ, तपाइँको डाक्टर वा हेल्थकेयर पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग दुईदेखि तीन हप्ताको अवधिमा आन्द्रा चाल छैन भने। यसबाहेक, चिकित्सा सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ यदि तपाई तीव्र पेट दुखाइको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ वा कब्जमा मलमा रगतको बारेमा। भविष्यमा कब्ज र कब्ज रोक्नको लागि सिफारिश गरिएको घर उपचारको बारेमा तपाइँको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्।
महिलाहरु को लागी5सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन शेक
रगत परीक्षण मा hct को अर्थ के हो?
जब कसैलाई फ्लू हुन्छ उनीहरु कति लामो समय सम्म संक्रामक हुन्छन्
atenolol को लागी ब्रान्ड नाम के हो?
Finasteride5मिलीग्राम को साइड इफेक्ट के हो
टाइप २ मधुमेहले तौल घटाउन सक्छ